(Redirected from Madzibaba)
Mazwi aya anotaurwa kuKalanga: Tate kureva baba; batategulu kureva sekuru (grandfather); batatenini kureva babamudiki.
Vatauri veKizigua, [[Nsenga], Ndonga, Kwanyama neUmbundu vanoti tate (father) kureva baba.
Vatauri veLenje, Tsonga neKikongo vanoti tata kureva baba.
VaChewa vanoti bambo kana atata (father).
VaYao vanoti atati (father).
VaGanda vanoti taata, baba kana kita (father) vachireva baba.
VaGiryama vanoti baba
VaBarawani vanoti waawe kureva baba.
VaDigo vanoti baba, sowe kana ise (father) vachireva baba.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Baba&oldid=70958"
This page was last edited on 28 Kukadzi 2020, at 00:29.